Gịnị bụ ezigbo okpu igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Okpokoro igwe kwụ otu ebe - olee otu anyị si edozi
Okpokoro igwe kwụ otu ebe - olee otu anyị si edozi
Gịnị bụ ezigbo okpu igwe kwụ otu ebe?
IseNnukwu okpu aghaN'okpuru $ 50
Giro Revel. Ọ dị mfe ihie ụzọ Revel maka otu ọnụahịa Girookpu agha.
Pụrụ iche iche. Dị skate-Covert bụukwumaka iji mepere emepe.
Ọnwa Ise 26, 2015
Họrọ okpu agha kwesịrị ekwesị dabere na ụdị ịnya ịnyịnya nke ị na-eme, site na mba gafere ruo na mgbada. Ka anyị leba anya na atụmatụ ndị a niile na ihe kpatara ị ji ahọrọ okpu ndị a. Ka anyi bido na okpu obe. (obi ụtọ funk music) Otu n'ime ihe ndị dị mkpa na mba na-agba mbọ ime ka isi gị dị jụụ mgbe ị na-agba ịnyịnya siri ike, yabụ enwere nnukwu oghere n'ihu okpu agha ahụ kamakwa na azụ iji mee ka ikuku gafere, ị nwere ike ịchọpụta na nke a dị ka okpu igwe n'okporo ụzọ nke ndị otu Pro Road na-eji.
Nnukwu ihe dị iche bụ n'ezie ọkwá. Nke a, okpu ụzọ, dị ntakịrị ọkụ. Na okpu igwe kwụ otu ebe, shei siri ike akwa mmiri aramid ma ọ dị ntakịrị karịa iji nye gị obere nchedo ịchọrọ na igwe kwụ otu ebe.
Di na nwunye nke oru ndi ozo. Okpu agha a nwere usoro mgbochi a na azụ nke ị nwere n'ọtụtụ okpu agha ụbọchị ndị a, okpu agha mara mma ma gbadaa n'azụ isi gị, kwụsị ịkwagharị mgbe ị na-anya ụgbọala, yana iko ndị a na-ahụkarị nke ị na-eyi otu n'ime ụdị okpu agha a bụ ugogbe anya anwụ Ezubere iji daba nke ọma n'okpuru ọkpọiso ya na okpu agha, nke m na-eyikarị. Nnukwu ihe dị iche bụ n'ezie ọdịdị nke okpu agha ahụ.
O nwere mkpuchi karịa n'azụ, kamakwa n'akụkụ, n'ihi na ndị a bụ ezigbo mpaghara dị egwu maka onye na-agba ụzọ ma ọ bụ onye na-agba ịnyịnya enduro. Ya mere, a na-ekpuchi azụ isi nke ntakịrị ntakịrị yana ụlọ nsọ. Oh, ị nwere usoro njigide ọzọ nke okpu agha a niile nwere.
Have nwere nche anwụ n’ihu. Yabụ, enwere okpu a nwere ibu karịa n'ihi atụmatụ ndị a na mkpuchi ndị ọzọ, mana ụfọdụ nke ikuku ahụ ejirila okpu na-agafe agafe iji mee ka okpu agha a dị ka o kwere mee. Ha nwekwara sistemụ njigide a nke dị na okpu okpu a, yabụ, enyo anya ị nwere ike iji ha bụ n'ezie nhọrọ enyo anya, mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya enduro, ị nwere ike ịmasị mkpuchi ọzọ ị na-enweta nweta ugogbe nke na-arụ ọrụ nke ọma na okpu agha a, skatepark, ihe ndị dị ka.
Ọzọ ị na-ahụ ọtụtụ nchedo karịa, yabụ obere oghere, mana ọ bụ okpu agha siri ike, nke a. Ugbu a, anyị nwere shei siri ike na ya, yabụ ọ bụ ihe nchebe. Liner ahụ ka bụ ihe anyị na-akpọ EPS, yabụ na ọ bụ ụfụfụ-polystyrene, dịka okpu agha abụọ ndị ọzọ, mana nke a nwekwara ProCore.
Zọ kachasị mma iji kọwaa nke a dị ka ntụnyere nkwusioru, ị nwere obere ngọngọ na ụfụfụ ahụ, mana ọ na-arịwanye elu karị, yabụ ọ bụrụ na enwere nnukwu hits iji duga na ogige skate ma ọ bụ na-awụda unyi a ga-echebe gị okpu agha ka nọ n’ihu ya. (upbeat funk music) N'ikpeazụ ruo okpu ihu zuru oke. Nke a bụ n'ezie karịa ihe ọ bụla ọzọ maka ndị na-anya ike ndọda.
Ndị na-agba ọsọ Downhi, enduro racers, freeriders, ihe niile ebe a na-emetụta nchebe. Ọ bụrụ na i jiri nke ahụ tụnyere okpu agha mba, ị ga-ahụ oghere ndị dị na ya, anyị ka nwere frants na okpu agha ihu ala na azụ, mana nke a abụghị okpu agha ịchọrọ ịzọ onye na-agba ya ogologo oge. Agbanye agba na okpu ihu zuru oke bụ naanị ebe ahụ iji kpuchido ihu gị.
Anyị nwere vents n’ihu ka ị nwee ike iku ume. Ugbu a maka ime okpu agha. Nke a bụ EPS, ọ bụ ihe ị nwere ike ịhụ 99% nke okpu agha na ahịa.
Ọ bụ naanị polystyrene. Ọ na-echebe n'ezie. Ihe ị ga-ahụ mgbe ị pịkọrọ ọ ga deform.
Nke a bụ ihe ndị na-emepụta okpu agha na-emesi ike na ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ọdịda ma daa isi gị, ị ga-ewepụ nke ahụ ma dochie okpu agha ahụ, nke a bụ EPP na nke a nwere ihe ndị na-agbanwe agbanwe ugbu a. Yabụ mgbe ị pịchara eriri ahụ, ọ na-apụta otu ụdị ọ dị. Nke ahụ na-enye gị nchebe ahụ maka ọtụtụ mmetụta.
Yabụ, teknụzụ niile a dị na okpu ihu a ihu n'ihi na ị nwere ike ịga ọsọ ọsọ dị elu, ebe dị ala, ịchọrọ nchebe ahụ. Nhọrọ nke iko maka okpu ihu. Nwere ike iyi ugogbe anya maka anwụ ọ bụrụgodi na ndị uwe ojii ejiji nwere ike ijide gị, yabụ iko na-eji okpu ihu zuru oke nke ka mma.
Ya mere, ka anyị pụọ. Nwere ike ịhụ na ọ bụghị naanị maka ụdị dị iche iche, ụdị okpu dị iche iche, ndị nrụpụta na-eche n'echiche banyere ihe eji eme okpu a iji mee ka ha rụọ ọrụ kacha mma maka ụdị ụgbọ ịnyịnya ị na-eme. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ọbụna isiokwu ndị ọzọ dịka nke a, pịa akara GMBN ka ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịnweghị.
Pịa ebe ahụ maka otu isiokwu, Cross Country vs. Enduro. N'okpuru, maka nsogbu ịma aka.
Nye anyị mkpịsị aka aka ma ọ bụrụ na ịchọta edemede a bara uru.
Okpu okpu na-agba ịnyịnya ala dị ọnụ ala ọ dị mma?
Adịghị mkpa na-emefu a uba na aokpu aghaiji hụ na isi gị dị jụụ, nwee ntụsara ahụ ma chebe ya ma ọ bụrụ na ị daa. N'ezie, n'agbanyeghị oke ntaramahụhụ,Okpu okpu agha mmefu egonwere ike ịdị kanchebena ọbụna mma na-achọ karịa ụfọdụ ndị ọzọ adịchaghị nhọrọ si n'ebe.Eprel 16 2021
kwesịrị ịgba ndị na-agba ịnyịnya agha ikpu okpu agha, ọ bụ isiokwu a na-ekwe nkwa iji kpalite ọgụ Onye ọ bụla nwere echiche. Nsogbu bụ na ha anaghị adabere na ihe akaebe Ka anyị bido site na ihe dị mfe Enweghị m nsogbu na okpu igwe mgbe m 'm na-agba ịnyịnya ígwè, M na-emekarị eyi otu mgbe m daa apụ m igwe kwụ otu ebe na m okpu agha na-ekwesị ruo eruo na m na-agba na ihe na ala na-agba. Ihe akaebe na-egosi na ịmanye ndị na-agba ịnyịnya ígwè ka ha kpu okpu agha ga-enyere m aka ebe ọ malitere ịmalite mgbagwoju anya. Nke mbu, ka anyi nuru site na dibia nke metutara isi ya n’ahu n’afọ gara aga. M gbara ịnyịnya ígwè gafee Amerịka, enyo ugo gwongworo gwuru m n’azụ isi m na 70 mph, kụtuo m n’ịgba ịnyịnya ígwè m wee gaa n’okporo ámá, mana m enwere m Kechioma m yi okpu agha, ma ọ bụrụ na ọ bụghị m ka m ga-anwụ na budata belata n'ike-n'ike n'ihi ya, ọ bụ mara mma Clear okpu agha nwere ike ịzọpụta ndụ, ma ugbu a, ka anyị nụrụ site na dọkịta ọzọ na ọ bụghị naanị maka ndị mmadụ mana ahụ ike ndị mmadụ n’ozuzu ha na-ele ezigbo anya na-egosi na ịkpu okpu igwe anaghị adị mma n’anya ndị mmadụ ma nwee ike belata oge ole ha na-agba okirikiri, enwere ọtụtụ ihe akaebe na uru ahụike nke ịgba ịnyịnya karịrị akarị ahụ ike.
Cingmanye iyi okpu igwe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ mere ka ịgba ịnyịnya ígwè dị nchebe, ọ ka ga-abụ ọnụ ahịa zuru oke na ọha na-eduga ahụike na ihe ọzọ na-eme mgbe ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-etinye ihe mkpuchi nke yiri ka ọ gbanyere mkpọrọgwụ na ọdịdị anyị Ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ ya ụgwọ ụgwọ. N’ụzọ bụ isi, mgbe inwere nchebe karịa, ị na-etinyekarị ihe egwu. Ee anyị nwere ndị mmadụ na ụlọ nyocha ma anyị na-agwa ha na anyị ga-eleba anya na mkpebi mgbe ha nwere ngwaọrụ nyocha na okpu agha ha wee mee mkpebi dị iche iche ịme ihe aga-eme na ọrụ ịgba chaa chaa ma anyị chọpụtara na ndị e nyere okpu agha dị na ọrụ ịgba chaa chaa emeela ihe ize ndụ dị ukwuu ma yie ka ọ na-egosi nyocha ndị dị egwu, yabụ ndị edemede yiri ka ha na-eji nchebe a eme ihe karịa ka ọ bụrụ ihe na-enweghị isi ebe ọ na-atụ ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ egwu karịa ka ha na ndị ọzọ na-agba ịnyịnya na nnwale ọzọ bụ Ian na a igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ na a mita mgbe ụfọdụ ọ na-eyi a okpu agha mgbe ụfọdụ na ọ hụrụ na mgbe yi okpu agha ahụ na okporo ụzọ na nkezi na-eru nso, mgbe ụfọdụ dị ize ndụ, n'ihi ya, anyị nwere abụọ kwere omume nkọwa na ọ nwere ike ịbụ ihe na-adịrị gị mfe na a okpu agha leghaara anya na al s Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ na mmeghachi omume nke nkọwa ndị ọzọ nwere ike ịpụta bụ na Glamour chere na echedoro ya ma nwee ike itinye ihe egwu.
Yabụ kedu ihe mere mgbe mba mebere okpu igwe anyị chọrọ? okpu agha ha na-emechi ya enweghị ihe akaebe na ha na-eji waya eme nke a. Ọtụtụ ndị ọkachamara igwe kwụ otu ebe na-ewe iwe nke ukwuu mgbe mkpọsa nchekwa igwe kwụ otu ebe dabere na okpu agha. Azụ a isụ na-abụ naanị iyi okpu igwe igwe mgbe ọ bụla ị nwere eriri, ọ bụghị ụmụaka bụ nke gị okpu agha ji nganga na-eyi ụfọdụ n'ime nkụda mmụọ ndị ahụ karịa ka ọtụtụ bụ ChrisBoardman onye bụbu onye mmeri n'egwuregwu Olympic na-aghọ onye na-agba ịnyịnya ígwè Helmet nkewa nkewa. nke ahụ dị ize ndụ Ọ dị mkpa ịgbanwe Dutch nọrọ afọ 40 na-arụ ụlọ igwe kwụ otu ebe dị mma ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-agba ịnyịnya agha, mana na ịgba ịnyịnya na Netherlands dị ihe dị ka okpukpu anọ dị ka nchekwa dị ka ụzọ UK ị maara, ị na-ewe ụzọ mkpirisi. n'ezie ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya mmasị r niile ụzọ ọrụ bụ ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu n'etiti motorists.
Yabụ ọ bụrụ na a manye onye ọ bụla iyi okpu agha ahụ mgbe ahụ maka ekele maka ikiri, mee ka anyị mata ihe ị chere na nkọwa ndị dị n'okpuru, lelee isiokwu ndị ọzọ na edemede ahụ wee hụ na ịdenye aha maka ihe ndị ọzọ
Kedu ihe bụ MIPS dị ọnụ ala?
N'eluAdịghị ọnụma ịnyịnya ígwèOkpu aghanaMIPS
Bern FL1 kpuchieMIPS.
Ntụrụndụ Agụba +MIPS.
Nutcase N'etiti abalị BlackMIPS.
Nnukwu Rev CompMIPS.
Ndewonu! N’isiokwu a anyị lere anya okpu igwe eji eji igwe kwụ otu ebe ise dị ugbu a. Anyị mepụtara ndepụta a dabere n'echiche nke anyị, nyocha, na nyocha ndị ahịa. Mgbe anyị na-ebelata nhọrọ kachasị mma, anyị weere ogo ha, ọrụ ha na ụkpụrụ ha.
Maka ozi ndị ọzọ na emelitere ọnụahịa na ngwaahịa ndị a kpọtụrụ aha, biko pịa njikọ dị na igbe nkọwa dị n'okpuru. Ndị a bụ okpu igwe ịnyịnya igwe ise kachasị mma. Ise ngwaahịa na anyị ndepụta bụ Ndụ.
N’adabere na nchekwa, okpu agha a nwere atụmatụ dabara na ụkpụrụ CPSC na CE. Ọ nwere ọkụ na-arụ ọrụ akpaka na ọkụ ọkụ ọkụ 270º. Ihe ndị a na-enye ọhụhụ ka mma ma meziwanye ọnụnọ gị n'okporo ámá.
Ndị nọ n'okporo ámá ga-ahụ gị site n'ebe dị anya. Kwesighi iyi akwa dị iche iche. Ma n'ihi na ọ bụ okpu igwe mara mma, ịnwere ike ịnụ ụtọ egwu ma were LIVALL na Bluetooth na igwe okwu.
Ha karịrị gị ntị ka ị ghara ịdọpụ uche gị n'okporo ụzọ. Enwekwara ọrụ Walkie-talkie. Nke a na-enye aka karịsịa mgbe ị na-eme njem n'otu ìgwè, ebe ọ na-enye gị ohere isoro ndị njem ibe gị kwurịta okwu dị mfe.
Agbanyeghị, ọrụ kachasị mkpa nke okpu agha a bụ eleghi anya nke ga - enyere gị aka izipu akara SOS na mberede. Nwere ike iji nke a site na ijikọ okpu agha na ngwa RIVALL ịnyịnya. Ọ bụrụ na ihe emee, akara mkpuchi mberede nke okpu agha ahụ ga-agbanye wee nwee ike ịkpọtụrụ ndị kọntaktị gị ozugbo.
Okpu agha a zuru oke maka isi nke 21.65 'ruo 23.23' n'ogo.
Nwere ike idozi ya site na iji ọkpụkpọ na azụ na kemeghi straps. Ndị a na-ahụ na ị na-eyi ngwa ọrụ nke ọma yana ị nwere udo nke uche. Uru ya bu: - O na - abia na Bluetooth na igwe okwu; - Ọ gụnyere ọrụ Walkie-talkie; - Ọ dakọtara na Ndụ IVnyịnya Ndụ; Na - Ọ nwere ọrụ nchekwa niile dị mkpa.
Otú ọ dị, ọ dị oke ọnụ. Na-enweghị nchegbu na-agagharị na ndụ. Okpu ịnyịnya ígwè a mara mma nwere ọrụ niile dị mkpa nke na-ekwe nkwa nchekwa gị n'okporo ụzọ, nke na-eme ya ego bara uru n'agbanyeghị ọnụahịa ya.
Sena X1 na-esote nke anọ. Sena X1 bụ onye ọrụ-enyi na enyi atọ-button imewe na n'akụkụ na dị mfe ịnyagharịa na-eji. Ihe mkpuchi a 12.35 oz na-abịa na batrị lithium polymer nke na-enye oge 16 nke oge okwu na oge elekere 3.5.
Ọ bụ okpu igwe igwe igwe etinyere na Bluetooth na ndị okwu ọdịyo nke HD na igwe okwu. Nwere ike ijikọ ya na ekwentị gị ma nweta ngwa dị iche iche dị ka ngwa ahụike, GPS na egwu. Pụrụ ọbụna ịkpọ oku ekwentị.
Site na okpu agha a ị nwere ike ịgwa mmadụ atọ ọzọ ihe karịrị 800 m na mbara ala. O dakọtara na ngwa ndị ọzọ Bluetooth na ngwa ọfụma maka nnukwu ngalaba intercom na njikwa ọrụ. Iji mee ka ihe ka mma, ọ na-eme ka nkà na ụzụ Advanced Noise Control na-ebelata ifufe na mkpọtụ ụda ka ị nwee ike ikwurịta okwu mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè.
Uru ya bu: - O dakọtara na ngwa bluetooth; - Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ama ngwa ọdịnala; - Ọ dị mfe iji; - Ọ na-enye ogologo oge ọrụ; na - Ọ na-onwem na HD audio ọkà okwu na a okwu. Agbanyeghị, ọghọm ndị a bụ: - Ọ nweghị ọkụ ọkụ ma ọ bụ ọkụ azụ ọkụ; na - ọ naghị enwe anwụ anwụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ okpu igwe mara mma na arụmọrụ Bluetooth, Sera X1 bụ ezigbo nhọrọ maka gị.
Yabụ ị na-ejikọ oge niile n'oge njem igwegharị gị. Chọtabeghị okpu igwe na-emezu ihe ị chọrọ? Nọgide na-ele anya, anyị nwere ọtụtụ maka gị. Ọ bụrụ na nke a bụ oge izizi ị ga-abịa na ọwa anyị, denye aha na ọwa wee pịa akara mgbịrịgba ka ịnata ọkwa maka isiokwu anyị na-esote.
Ngwaahịa nke atọ na ndepụta anyị bụ LUMOS Kickstart. LUMOS Kickstart na-enye gị ọkụ na ihe ngosi n'isi gị ekele maka ọkụ ọkụ ya. Ọ nwere ọkụ na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha n'ihu na uhie LED na azụ ka ị wee hụ n'okporo ámá, ọkachasị n'abalị.
Ọrụ Bluetooth nwere ike ịmekọrịta eriri ikuku bọtịnụ abụọ na aka gị na okpu agha mgbe ị gbanyere ya. Ya mere, mgbe ị pịrị bọtịnụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri, okpu agha gị ga-enwu n'otu ụzọ kwesịrị ekwesị. Igwe na-achịkwa mmiri anaghị ekpuchi mmiri, yabụ ịnwere ike iji ọrụ a ọbụlagodi mgbe mmiri na-ezo.
Okpu agha a kwekọkwara na LUMOS Helmet APP. Nke a na - enye gị ohere ịhazi ụda nke akara ngosi ntụgharị. O nwekwara ọkụ ịdọ aka na ntị akpaka.
Ejikọtara ya na accelerometer okpu agha ahụ, njirimara a na-enyere aka iulateomi ọkụ ọkụ igwe. Ọ na - achọpụta mgbe ị na - akwụsị nwayọ ọsịsọ ma ọ bụ kwụsị na mberede. N'okwu a, ọkụ na azụ ga-acha uhie uhie.
Batrị LUMOS Kickstart nwere ike ịdịru aka elekere isii. Ọ dị mma maka oge 30 ruo 45 nke igwe kwụ otu ụbọchị na-aga. Mgbe batrị tọgbọ chakoo, cheta ịkwụnye okpu agha na njikwa.
Ọ dị ihe dịka 1 lb ma tụọ 21.3 ruo 24.4 sentimita.
Ọ bụ ezie na o kwesịghị iji dochie ọkụ ihu igwe gị na azụ ya, okpu a nwere ike ime ka ịnyịnya gị ghara ịnwe nsogbu site na iwepu mkpa ọ dị inye akara aka. Uru ya bu: - O nwere nhazi di nma; - Ọ na-abịa na-enwu gbaa Ikanam ọkụ; na - ndi otutu ya bara uru. Kaosiladị, ọghọm ndị a bụ: - Ọ dị arọ; - Ọ bụ naanị dị na otu size; na - ọ dị oke ọnụ.
Lgba LUMOS Kickstart na-eme ka ọhụhụ gị na okporo ụzọ, ọkachasị n'ọchịchịrị. Igwe ọkụ na-enwu gbaa n'ihu na n'azụ yana akara ngosi nke ọma na-eme ka nchekwa gị dịrị na njem ọ bụla. Ngwaahịa nke abụọ na ndepụta anyị bụ Safe-Tec Tyr.
Nchekwa-Tec Tyr bụ okpu agha mara mma nke nwere ihe ejiri ọkụ, ọkụ breeki na ọkụ LED na ọkụ azụ. Ejiri ya MIPS ma ọ bụ Multidirectional Impact Protection Sistemụ, teknụzụ na-agba okirikiri eji arụ ọrụ iji belata ikike ntụgharị nwere ike ibute na ụfọdụ mmetụta. Mpụga elu nke okpu agha ahụ bụ nke polycarbonate.
Ọ na-abịa na ịkpụzi Coolmax na-ebu maka nkedo ụfụfụ ya iji nye nkasi obi ma hụ na nkwụsi ike kachasị. Okpu igwe igwe kwụ otu ebe a na - agụnye ndị na - ekwu okwu ọkpụkpụ Bluetooth na igwe okwu. Site na njirimara ndị a, ị nwere ike ịnụrụ egwu ma ọ bụ kpọọ oku mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè gị n'emeghị ka ihe ọghọm okporo ụzọ pụta.
O nwekwara ikuku ikuku na-enye gị ohere ijikwa ọkụ ọkụ dị n'ime na n'ihu dị ka akara ngosi. Na mgbakwunye, a kwadebere ya na ọkụ ọkụ breeki na-akpaghị aka ka ị wee hụ gị n'akụkụ niile. Nchekwa-Tec Tyr na-abịa na akwụkwọ ikike nwere oke afọ 2.
ịnyịnya ígwè snow
Okpu agha a na-ezutekwa ọtụtụ ụkpụrụ nchekwa, gụnyere njikwa mmiri na-enweghị mmiri nke na-ezute ọkọlọtọ IPX6, okpu agha na akara ntanetị na-ezute ọkọlọtọ IP65, na asambodo CPSC. Uru ya bu: - O di nfe; - Ọ bụ kemeghi; - Ọ nwere ezigbo okwu Bluetooth; na - ọ na-abịa na a 2 afọ akwụkwọ ikike. Otú ọ dị, ndị na-ebugharị ihe adịghị enwe mmetụta na mbụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ okpu igwe eji igwe igwe eji arụ ọrụ na teknụzụ ọhụụ, gbalịa Safe-Tec Tyr 3. Okpu agha a mara mma na-enye gị ohere ijikọ ma nwee nchekwa mgbe ị na-agagharị. Tupu anyị ekpughe nọmba 1, gbaa mbọ hụ na ịkọwapụtakwara nkọwa dị n’okpuru maka azụmahịa ndị ọhụrụ na nke ọ bụla n’ime ihe ndị a.
Jide n'aka na ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ ruo ụbọchị na ngwaahịa kachasị mma na ahịa. Ka emechara, anyị n'elu smart igwe kwụ otu ebe bụ Sena R1. Sena R1 bụ okpu agha US-CPSC nke nwere asambodo EPS siri ike na mkpokoro siri ike nke ejiri rọba polymer.
Ọ ana achi achi gị nchekwa na ya n'azụ ọkụ na ya ala na mma imewe. Ejikọtara ya site na Bluetooth ka ị nwee ike ịmekọrịta ama gị na okpu agha ma nweta ọrụ ndị ọzọ dị elu. Nwere ike ịnweta ọrụ ndị a site na iji iwu ọnụ.
Jiri okpu agha a ị nwere ike ige ntị pọdkastị, lelee ọdụ redio, nweta Google Maps na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwekwara ike ịkpọ ekwentị. Igwe okwu na-eme mkpọtụ na-eme ka o doo anya na onye nke ọzọ n’ahịrị nwere ike ịnụ gị ọbụlagodi ma ị nọrọ n’etiti okporo ámá.
Nwere ike imekọrịta ya ruo okpu okpu anọ dị iche iche nke otu ụdị site na intercom jikọtara ọnụ. Nke a dị mma ma ọ bụrụ na ị ga-eso otu. Ọ bụ ụzọ dị jụụ ma dị mfe iji jikọta ya.
Can nwere ike iji nke a ma ọ bụrụhaala na ị niile nọ n'ime oke dị ọkara kilomita. Uru ya bu: - O wuru igwe na-ekwu okwu n'ime ogbe okpu agha; - Ọ n’eme ka nkwukọrịta okwu n’etiti okpu agha; - Ọ gụnyere teknụzụ nchedo mkpọtụ; na - Ọ na-enye ohere dị iche iche ngwa ọdịnala site na smartphone njikọ. Otú ọ dị, ọ dị oke ọnụ.
Sena R1 bụ smart igwe okpu agha na-enyere aka enweghị nkebi smartphone mwekota. Ọ ana achi achi na ị nọrọ njikọ ma nwekwaa nchebe sitere na njikọ Bluetooth dị elu. Nke ahụ niile bụ maka ugbu a.
Daalụ maka ikiri! Ọ bụrụ na anyị enyere gị aka, biko pịa bọtịnụ 'Dị ka' na 'Idenye aha'. Lee gị n'isiokwu ndị na-esonụ!
Ndi igwe okpu igwe choro MIPS?
MIPS okpu aghanye onye amara ogo nke ihe nileigwe kwụ otu ebendị na-agba ịnyịnya. Ya mere ọ bụrụ na ị dị njikere iji dochie ochie gịokpu agha, mgbakwunye $ 20 ma ọ bụ karịa iji kwalite site na ndị na -MIPSkaMIPS-equipped nlereanya bụ nke ọma-kwesịrị price. Ugbu a,MIPSteknụzụ dị na họrọokpu aghaesi Giro, Bell, POC, Scott, na Lazer.27bọchị 27 2015
Kedu ka m ga - esi họrọ okpu igwe igwe?
Naokpu aghakwesịrị ịba ọfụma ma ọ bụghị n'ụzọ na-enweghị nkụda mmụọ, jiri isi gị na-edekọta ụfụfụ ụfụfụ dị nro n'ime-ọbụnadị tupu eriri ahụ esicha ike.Họrọnke ahụ dabara nke ọma dịka o kwere mee n’enweghị nkasi obi n’ụzọ siri ike. Jirizie ihe nkedo, ma ọ bụrụ na enyere gị, iji mezie ihe kwesịrị ekwesị.June 9. 2021
Kedu ihe dị iche n'etiti okpu igwe igwe dị ọnụ ala ma dịkwa oke ọnụ?
Nchedo na mma
.B.dị ọnụ ala okpua ga-eji ya wuodị ọnụ ala karịaihe karịa a ọzọdị oke ọnụotu maka ihe doro anya. Ọ bụrụ na ịhọrọdị ọnụ ala karịaOtu ọ ga - adịchaghị mma ogologo oge ọ bụladị oke ọnụotu, mana echegbula, ha ga-enye gị isi nchebe n'oge gị na-agba ịnyịnya.
Ọ nwere ọdịiche dị n’etiti okpu igwe dị ọnụ ala ma dịkwa oke ọnụ?
Ebe ahụdị nnọọ ole na oleọdịichena arụmọrụ n'etitiokpu agha. Nkwubi okwu anyi: mgbe ị na-akwụ ụgwọ ihe ọzọ maka aokpu aghaị nwere ike nweta ihe dị mfe dabara, ọzọ vents na snazzier ndịna. Ma isi mmetụta nchedo nkeokpu okpuanyị nwalere nhatadị oke ọnụndị. Naanị chọọ aokpu aghanke ahụ dabara gị nke ọma.28.09.2020
Okpu igwe igwe dị oke ọnụ karịa?
Nke mbụ, enweghị ọdịiche dị na nchekwa n'etiti $ 30okpu aghana $ 200okpu agha. Ka e wee ree ha n'ụzọ iwudị ka okpu igwe, niile ga-emerịrị otu usoro iwu nchekwa.Ya mereihu ọma, ị na-akwụ ụgwọ maka ihe abụọ: anya na nkasi obi.
Kedu ihe na-eme ka igwe okpu igwe dị oke ọnụ?
Ihe ndị ọzọokpu okpuA na-akpụkarị ya ma kee ya ka o nwekwuo ikuku, na-enwu ọkụ, na-agbanwe agbanwe, nwee ahụ iru ala, mana n'ikpeazụ, ị tụkwasịrị ha obi na ha ga-arụ ọrụ ahụ. M na-eyi aokpu aghan'ihi na mgbe m na-agba ọsọ, m ga na-agba ọsọ ma mgbe m na-aga, m na-enwe nrụgide nke onwe m iyi otu.
Kedu nke kacha mma ịnyịnya igwe iji zụta?
Nhọrọ nyocha anyị gụnyere ụdị dị omimi miri emi & amp; aghụghọ, gụnyere nke kacha mma ọnụ ala anyịnya igwe lekwasịrị anya n'okporo ụzọ, ịnyịnya ígwè, njem, & nkwupụta ụda; Multi-cipdọ aka ná ntị iji obi sie na ị chọọ Best Budget Bike Helmet maka ihe ị chọrọ.
Kedu nke bụ okpu igwe igwe kacha mma na MIPS?
Ulo Okpukpo Ugwu Na-adighi Ego ma Nchekwa. 1 Bell Draft MIPS. Bell's Draft helmet na-egosipụta vents 25 maka ikuku ikuku dị jụụ na usoro ịpị otu aka maka mmezi mgbanwe kwesịrị ekwesị. Ọ arọ 299g 2 Bell Formula MIPS. 3 Pụrụ iche Echelon II MIPS. 4 Giro Isode MIPS. 5 Giro Debanye aha MIPS. Ihe ndị ọzọ
Kedu ihe ị ga-achọ na okpu igwe?
Mgbe ị na-azụ ahịa okpu igwe dị ọnụ ala, ịnwere ike ibu ụzọ lelee onyinye mmefu ego nke ahịa, ụdị okpu agha na-enye nkasi obi na nchekwa dị ukwuu ma na-elekwasị anya na ọnụahịa ahụ, na-akwụkarị ego ndị ahụ na-adịchaghị mkpa dị ka ibu, aerodynamics ma obu ikuku ikuku.